Vaovao Farany Ao Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Poloney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2017 2:54 GMT
Efa nanontany tena ve ianao hoe andro inona eo amin'ny fiainan'ny olona iray monina any Polonina no mitovy amin'ny lahatsary maharitra 10 minitra? Tsy nahafantatra koa aho raha tsy tonga tany Polonina. Nametraka webcam tao amin'ny varavarankely ao an-tanànan'i Varsovia ny Blog from Poland (bilaogy avy any Polonina). Azonao jerena ve ny fiara fitateram-bahoaka manjelatra, mavo sy mena? Amin'ny fampiasana ny teknolojia Google, afaka mahita sisin-dalana ao an-tanànan'i Varsovia eo noho eo ianao.
Mitohy amin'ireo fampisehoana tsy misy fahaiza-manao, mitatitra momba ny drafitra ratsy tantana avy amin'ny tarika Teatira Mozika Lublin hanao fampisehoana ao amin'ny tobin'ny fahafatesana tamin'ny andron'ny Ady Lehibe Faharoa ny beatroot. Indrisy,
Tao amin'ny takelaka fametrahana fanehoan-kevitra, na dia izany aza, DBN manontany tena hoe aiza ny dikanteny Poloney amin'ny ACLU:
Avy amin'ny hevitra hafahafan'ny hetim-bolo miendrika borosy an'ireo lazaina fa tanora “tsy manana hoavy” ao Polonina, matahotra i P3 fa mety hitera-doza ny kolontsaina punk mivoatra ao Polonina, na dia “any amin'ny firenena izay mirehareha amin'ny tenany momba ny toetra amam-pitondran-tena sy ny governemanta mirehareha amin'ny tenany momba ny fitondran-tena.” Tena tranga amin'ny tsy fisian'ny lehilahy maodely ve izany, sa fikomiana tranainy fanaon'ny tanora fotsiny ihany? Nitaraina i P3:
Amin'ny bilaogy amin'ny teny Poloney: misy olona manahy nony farany noho ny fitomboan'ny isan'ireo tanora, miala ny firenena ireo Poloney matihanina mba hitady ny harenany any ivelany. Nanao fanentanana ara-dokambarotra tao Londra ny tanànan'i Wrocław, izay toa tsy ahitana ekipa matihanina amin'ny fananganana trano sy mpanamboatra fantson-drano, mba handresy lahatra ireo mpifindra monina Poloney mba hiverina sy honina ao Wrocław. Oops! naneho hevitra hoe (POL):
Tsy tokony hiahiahy isika, na izany aza: tsy ho tany foana tanteraka i Polonina. Ho solon'ireo tanora matihanina an'arivony maro nandao ny firenena, hahazo mpizahatany tandrefana maro dia maro isika – mitady ny sasantsasany amin'ireo zavatra Sovietika taloha tsy mahazatra – tsy lazaina intsony ny tolotra ara-pahasalamana mora kokoa: